Abamele i-ISEESO uNks Luyanda Gumede kanye noNks Sphokazi Sgwebela bakhuluma ngobubi bokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Abamele Isibani Educational Empowerment Students Organisation (i-ISEESO) bavakashele i-Ean Touch Online Radio ukugubha Usuku Lwabesifazane Kuzwelonke.
Abameleli uNks Luyanda Gumede (Unyaka wesi-2 LLB) kanye noNks Sphokazi Sgwebela (we-Economic History Honours) bafunda eKolishi eliseKhempasini yase Howard.
Inhloso yalolu hambo kwakuwukunikeza abantu besifazane amandla baphinde bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane ezikhungweni zemfundo ephakeme nasemphakathini jikelele.
‘Sigqugquzela abantu besifazane ukuba bakwazi ukuzimela ngoba abantu besilisa badlala ngawe uma uncike kubona, ikakhulukazi ngakwezezimali. Ungabi umuntu wesifazane odinga owesilisa kodwa iba umuntu wesifazane odingwa owesilisa,’ kusho uSgwebela.
‘Kuyadabukisa ukuthi asisakwazi ukuhamba ngokukhululeka ekhempasini yethu ngenxa yabantu abenza okubi abasihlukumeza mihla namalanga futhi siyazenxusa iziphathimandla ukuthi zibathathele izinyathelo labo abenza okubi kumele bafele ejele, futhi siyabenxusa abantu besifazane ukuthi bangathuli. Le nkinga yabadizayo kufanele ibhekwe ngokuphuthuma. Lababantu besilisa bakuthembisa imali, izingubo zokugqoka ezibizayo, ukuvakashela amazwe omhlaba nabo bonke ubukhazikhazi uma nje uzomunikeza ucansi. Abafundi besifazane abangenalo uxhaso noma imali yokubalekelela basengozini. Ngakhoke sinxusa bonke abantu ukuba basukume balwe nalesiqalekiso,’ kusho uGumede.
Ucwaningo olwenziwe Abalwa Nokuhlukunyezwa Kwabesifazane Nezingane (i-POWA) lukhombisa ukuthi ukuhlukunyezwa kwabesifazane kusekuningi kanti futhi akubikwa ngendlela futhi nalaba abahlukunyeziwe abakutholi ukwesekwa ngendlela kubasebenzi bezomphakathi.